Dhambaal Dardaaran ah oo ku Socda Dadweynaha Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Dhambaal Dardaaran ah oo ku Socda Dadweynaha Somalida Ogadeeniya
Shabeel bara leh sheekhii Iblaysyada shaydaanka dhoorka leh shuuf, dadka kala shidheeyaha shannaqe waanigaa shacabkii kuu sheegay, Ogadeen shakiye caaqiladi sharaftu saarayde shuuf caynak, shirka beenta shabahaadu waa khalad hadaan nala shirqoolayne.
Waxaan dhamaan ku wargalinaynaa dadweynaha Somalida Ogadeeniyain in la fahmay tabaha siyaasadeed ee ay ku shaqaynayaan kuwa isku sheega in ay ehel u yihiin Jwxo, haatanse uu dadweynuhu hayo xogtooda dhabta ah. Waxaan filaynaa in aad la socotaan in hagar daamooyinka ay gaysanayaan kooxahani uu maalinba maalinta ka dambeeysa khaladaadkoodu sii badanayo, ayna muhiim tahay in dadweynuhu si dhab ah uga hor yimaado. Halkan waxaan ku soo qaadanaynaa khaladaadkooda ay ka galeen halganka;
1. Wixii ka dambeeyay December 2006, waxay Jwxo-shiil iyo Xulufadiisu go’aan ku qaateen in ay Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo], si cilmiyaysan u kala diraan iyaga oo leh ujeedo fog, xiligana ay dadweynaha badankiisu si cad u fahamsan yihiin. Waxay diideen in wax xal ah laga gaadho Khilaafkii Jabhadda kala diray, iyaga oo meel iska dhigay danta guud mid gaar mooyee. waxaana burburay isku day kasta oo xal loogu heli lahaa sida;
Ergadii Odayaasha reer Ogadeeniya ee London iyo Brimingham 
Maxakamadii Xalinta Khilaafka Cabdulahi Mukhtaar [Denmark 2006]
Ergadii Gabdhaha Somalida Ogadeeniya 
Ergayntii Beelaha ee London 
Kuli Dadaaladaas ay sameeyeen xubnaha uruurka dhexdiisa, ururada bulshada iyo shakhsiyaadka Jeclaa in xal waara laga gaadho khilaafka ururka dhexdiisa yaal, waxaa waxba kama jiraan ka dhigay Jwxo-shiil iyo kuwo aragti gaaban. Waana kaas abaalka aynu maanta hayno wanaag iyo xumaan kuu yahay dadweynuhu iyaga ayaa ogg.
2. Waxaa Sanadkii 2006, markii ay gashay Itobiya Somaliya xadka Kenya laga qabtay Bashiir Axmed Makhtal, waxaana lagu qabtay [cash US$800,000], Bashiir oo ah oo ah nin da,a yar haystana dhalashada Canada, waxaa uu ahaa hogaanka Gaashaan dhiga ee Jwxo, ahna la taliyaha gaarka ah ee Jwxo-shiil [Maxamed Cumar Cismaan]. Ma jirin wax dan Jabhadeed ah oo la waday laakiin waxaa socotay dano gaar ah, nasiib daro aad u weyn oo uu masuuliyadeeda leeyahay Jwxo-shiil waxay ku dhacday Bashiir iyo qaar kale oo badan. Dhibaatooyinka aan la halmaami karin ee isaga oo leh ka faa,iidayso Jwxo uu ku dhibaateeyey qoysas ka mid ah xigtadiisa xisaab ma leh;
Qabiil wax ku qaado [Dad baa ku dhibaataysan]
Jabhadu yayna gacantaada dhaafin [Way kala socotay]
Qabiil awood ku yeelo [ceeb iyo takoor waata taagan]
3. Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] wixii ka horeeyey sanadkii 2006 cirka ayey maraysay, halmar ayeyna ku soo dhacday meel aad u hoosaysa. Xulufadda Jwxo-shiil ma aha, dad aan wax fahmaynin, way dareemeen in uu jiro burbur aan la hakin karin, ilaa shirweyne xaliya khilaafka la qabto. Balse waxay noqdeen dad aan ku dhiiran karin in ay war ku soo celiyaan Jwxo-shiil. Sidaas darteed waxay dhankoodii ka bilaabeen in ay iyaguna sii burburiyaan, iyaga oo aan u aabayeelaynin khasaaraha soo gaadhaya dadweynaha.
Xumaanta way arkayeen waxna way qaban kari lahayeen, arimahan ayaa calooshooda ku jiray;
Hadaad hadasho, armuu Jwxo-shiil, Jwxo kaa saaraa [awood laawe]
Waxba igama galin wixii dhacaya kol hadaan nolol haysto [danayste]
Shirarka waa masuul hebel baa lagu dhihi, kugu filan [doqon]
4. Jwxo-shiil, wuu hubsaday shaqaalihiisa, waxaana uu go’aansaday in kolba hadii ayna jirin cid leh awood ay ku tidhaado waa khalad, in ruuxii isku daya in uu iyaga wax ka sheego ama u sheega, uu iyaga u adeegsado. Taa waxaa ka sii daran, go’aankan ah in la laayo dadweynaha iyo Masuul alla Masuulkii fikirkiisa ka soo horjeesta ee Jabhadda JWXO ka tirsan. Go’aanka lagu dilay Dr. Dolal waa mid ay si wada jir ah uga qayb qaateen Jwxo-shiil iyo Xulufadiisa, sida Cadaani, Mohamed Ismail iyo Maadey, waxaa iyana dabinka dhigay in la dilo Dr. Dolal Cabdullahi Mukhtar, Diirane iyo kuwa la mid ah. Xaasidnimadu waa ficil shaydaan waxaana gardaadisa garasho la,aanta sida;
Dilka iyo dhagrida Saaxiib kuu dhaw [Dr. Dolal iyo kuwo badan]
Xumaan dadweynuhu kugu ogg yahay maalin walba dhex taagnow [shir baa la qaban]
Ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay ama Madasha lama tago [fikir hor leh]
5. Qodobka ugu dambeeya ee aan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku xusuusinay daacad darida kooxda Jwxo-shiil, Beenaale ruux dhintay iyo ruux dhoofay buu markhaati u qabsadaa. Waxaa mudo dhawr bilood ah dhex hoganaya boggaga Internetka warqad cabasho ah [Petition for Ogaden] oo la sixiixayo oo uu ogolaaday xafiiska R/wasaaraha Ingriiska, waxaa diiday in ay waarqadaas saxiixaan kuwa sheeganaya in ay wadaan shaqo halgan. kuwa diidan in ay saxiixaan arjiga cabasha ee dadweynaha Somalida Ogadeeniya kaga cabanayaan xukuumada Itobiya, walina sheeganaya in ay yihiin Jwxo waxaan ku sifayn karaa sidan;
Waxay ka soo horjeedaan Halganka Somalida Ogadeeniya [xabashaa war jira]
Ma aha dad wax ogg, waxay is lee yihiin waa la idin dagayaa [fulaynimo]
Waxay kaalmaynayaan gumaysiga oo ma wadaan dan qadyadeed [khaa,imiin]
Hadaba inaga oo maskaxda ku hayna arimahan ku ku xusan iyo kuwo ka badan, waxaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya kula talinaynaa in ay ka fogaadaan kooxda Kha,inul wadanka ah ee Jwxo-shiil. Kooxda Jwxo-shiil waxaa kaliya oo ay danaynayaan jeebabka dadweynaha Somalida Ogadeniya, lagama yaabana horena uma dhicin in ay la yimaadaan wax dan u ah daweynaha halganka iyo dadweynaha midna.
Waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ay ka fogaadaan shirarkooda shirqoolka ah oo inta badan halganka lagu burburiyo, shirqoolada ay halganka ku hayaan dadweynuhu wuu ka dharagsan yahay shirqoolada ay ugu adeegayaan gumaysiga.
Shirka waxaa ka horeeya sharciyada oo la helaa, shirka waxaa ka horeeya halganka oon run ka sheegno, shirka waxaa ka horeeya mee Naftood hurayaashe?
rasaas baa runta sheega ee rafiiqaaga ka yeelo
Jwxo-shiil iyo woyyane Wacad Baysumareen, Waxna Waan Aragnaa!!
Ogaysiis ku Socda Dadweynaha Somalida Ogadeeniya